Dabeylo ku dhuftay Xeebaha Mudug & Nugaal, Khasaare la sheegayo & Isgaarsiinta oo hawada ka baxday.
GAROOWE(P-TIMES) – Mudo laga joogo 4 saacadood ka hor dabeylo iyo roobab is wata ayaa ku dhuftay deegaanada ku teedsan xeebaha gobalada Mudug & Nugaal ee Puntland, waxaana markii ugu war dambeysay la ogaa in ay dabeyluhu si waxyeelo geysteen oo ayguryaha inta badan Saqafka ama jiingada ka qaadeen, sida aan kasoo xiganay laamo katirsan Booliska Puntland.
Deegaanada ay duufaantu saameysay markii war ugu dambeysay waxaa kamid ahaa Degmada Eyl, Garacad, Dhanaane, Dhinowda iyo deegaano ku dhaw dhaw, si saf mar ah, waxaana ilaa hadda aan la haynin xaaladda deegaanadaas.
Biyo fara badan ayaa kusoo rogmaday deegaanada qaarkood, waxaana muuqata in ay go’odoon kale galeen deegaanada xeebaha kuyaala ee Puntland, gaar ahaana labada gobal.
Ma jirto wax isgaarsiin ah oo shaqeynaysay, ka dib markii ay roobabka iyo duufaanadu si adag ku bilowdeen, waxaana horey loo saadalinayay in uu isbedelo ku imaanayo jihada dabeyshan ay ku socoto.
Wasaaradda Arrimaha gudaha Puntland oo aan la xariirnay wali kama jawaabin telfoonada iyo aaladaha xariirka bulshada, sidaas oo kale taliska Booliska Puntland ayaan kasoo xiganay in macluumaad ama xogta deegaanadaas la waayay afar saacadood ka hor.
Warar madax banaan ayaa xaqiijinaya in roobabku ay ka da’ayaan Sanaag, Barri, Gardafuu, Nugaal & Mudug, ayna qaarkood wataan dabeylo xoog leh.
Roobab ayaa ka da’aya gobalka Nugaal intiisa badan, kuwaas oo durba Togaga iyo meelaha biyuhu marayaan kusoo rogay biyo fara badan, waxaana cabsi laga qabaa in ay saameyn adag yeeshaan biyaha dhulalka kusoo rogmaday.